Xaflada Daahfurka Qaamuuska Doorashooyinka iyo stratijiyada 5ta sano ee GMDQ – GMDQ
Xaflada Daahfurka Qaamuuska Doorashooyinka iyo stratijiyada 5ta sano ee GMDQ
Xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa GMDQ ku qabteen magaalada Muqdisho. 11kii December 2017. Xafladaas ayaa ujeedkeedu ahaa soo bandhigida qaamuuska ereybixinta dooroshooyinka iyo daahfurka qorshaha istiraajiyada 5 sano ee GMDQ. Xafladdan ayaa waxaa kasoo qayb galeay qaybaha kala duwan ee bulshada, madaxda DFS, siyaasiyiin, xildhibaano, beesha caalamka qaybaheeda daneeya arimaha doorashooyinka, ururrada bulshada, xisbiyada KMG ee siyaasadda, dhalinyarada iyo saxaafada.
Qaamuuska ereybixinta ee GMDQ waxaa diyaarintiisa ka qayb qaatay khabiirro Soomaaliyeed oo kala ah Axmed Cali Farax (Idaajaa), C/fataax Cabdulaahi Gacma-Dheere iyo Yuusuf Garaad.
Khubarada ka qayb qaatay diyaarinta qaamuska ayaa si kooban uga hadlay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray iyo faaidada uu u leeyahay bulshada Soomaliyeed khaasatan doorashooyinka 2020kainay dalka ka dhacaan.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Taabit Cabdi ayaa sheegay inuu aad ku faraxsanyahay ka qaybgalkiisa xafladda daahfurka qaamuuska ayaa wuxuuna ku boorriyay Guddiga inay ka galaan taariikhda Soomaliya baal dahab ah oo ay ka dhabeeyaan qabashada doorashooyin ka qof iyo cod ee aan horey uga suurtoobin dalka inay ka dhacdo. Wuxuu carrabka ku dhuftay in raja wayn uu ku qabo in la gaarayo doorasho qof iyo cod ah maadaama guddiga uu ku socdo dardar uuna u shaqaynayo si hagar la’aan ah.
Sidoo kale Ku xigeenka Xoghayaha guud ee qaramada midooway u qaabilsan Somalia Mr. Raisedon Zenenga ayaa u mahadceliyay, kuna ammaanay GMDQ dadaalkooda dheeriga ee ay ku hiigsanaayaan inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod dalka. Wuxuuna ku daray hadalkiisa soo bandhigidda qaamuuskan iyo istiraatijiyada 5sano inay dhiiragalinayso dhamaan daneeyayaasha doorashooyinka iyo ummada Somaliyeed meelkasta oo ay joogaan.
Mudane Xuseen Cabdi Aadam, xubin ka tirsan GMDQ ahna madaxa u qeybsan wada-xiriirka dadweynaha ayaa ka hadlay qaamuska wajiyada uu soo maray bilawgiisa ilaa iyo hada wuxuuna sheegay in si joogta ah loo sii horumarindoono qaamuuskan oo halkan aan looga harayn. Sidoo kale qaamuuskan inuu horseedi doono hodontinimo luqadeed iyo inuu qayb wayn ka qaadan doono hor u socodka iyo fahamka doorashooyinka.
Xildhibaanad Fowziya oo u hadlaysay xisbiyada KMG ee siyaasadda ayaa waxay sheegtay inay ku faraxsantahay tallaabooyinka guusha leh ee GMDQ u sii qaadayaan dhinaca doorashooyinka sida qaamuuskan iyo istiraatiijiyada 5 sano ee maanta horyaal.
Jamal Xassan, waziirka wazaarada qorshaynta ayaa sidoo kale sheegay in uu ku faraxsan yahay is waafaqsanaanta horumarka iyo istiraatiijiyada GMDQ iyo inay wadaagi doonaan shaqooyin dowr ah oo ay ka mid tahay tirakoobka bulshada, si loo helo codbixiyaasha tiradooda saxda ah loona diiwaan galiyo.
Xalima Ismaciil ayaa waxay u mahad celisay dhamaan kasoo qayb galayaasha xaflada iyo sida ay usoo ajiibeen cusuumada uu GMDQ u fidiyay, waxayna u balanqaadday umada Soomaliyeed in guddiga sii laba laabi doono dadaallada uu ugu jiro inay suurta gasho doorashada qof iyo codka ee ka hirgasha dalkeenna sannadka 2020ka.